Abwaan Guuleed Yuussuf Ahmed Ayaa Maqaal Kaga Jawaabey Magacaabistii ay Dawlada Somalia Magacawday iyo Hadalkii uu kaga Fal celiyayay Abwaan Yuusuf Shaacir. | CeelGardi News
Home Articles Abwaan Guuleed Yuussuf Ahmed Ayaa Maqaal Kaga Jawaabey Magacaabistii ay Dawlada Somalia...
Abwaan Guuleed Yuussuf Ahmed Ayaa Maqaal Kaga Jawaabey Magacaabistii ay Dawlada Somalia Magacawday iyo Hadalkii uu kaga Fal celiyayay Abwaan Yuusuf Shaacir.
Hordhac: Haddii Eebbe qadaro, maqaalkan kooban, waxaan kaga hadli doonaa, dhacdo ugub inagu ahayd, oo maalmahan inagu soo korodhay.
War idinkuma seeganee, waa magacaabistii ka timid Dawlada Soomaaliya, ee Abwaan Yuusuf Cismaan Cabdulle “Shaacir” oo inagula sugan ceelkan Hargaysa. Si gooniya waxaan kaga hadli doonaa, dhawr goobood oo Abwaanku kaga hadlay arintan iyo wixii iiga baxay hadaladiisaa. Sidoo kale, ka afeefanayaa, inaan maqaalkaygan Abwaanka iyo cid kale toona u qaadan turxaan. Waa se toosin iyo hogo-tusaaleyn Hal-abuurnimo oo lexejeclo weheliso.
Ugu horrey, Abwaanku waa qofka loogu ixtiraamka badan yahay bulshadeena dhexdeeda, waxaan filayaa inaad sidaa u og tahay Abwaan Yuusufow?
Abwaanku marka uu dadkiisa dhaqdo, in
isagana dadkiisu dhaqdaan, sow ma ogid Abwaan Yuusufow?
Qoyska u xil-qabkiisa iyo u xil-qarintiisa halka Hooyadu ugu jirto, in Abwaankuna Qarankiisa ugu jiro, taana sow ma ogid?
Kasha gobta xurmaa deeqda ee xoolo ma deeqaan, taa sow ma ogid?
Yuusufow shaqo ummadi leedahay oo uu abwaanku u kallaho, islamarkaana uu mushahar kaga mutaystaa, maba jirtee, taa sow ma ogid?
Cidina kama shaqo badna askarigeena, habeen iyo maalinba heeganka inoo ah, haddana cidina kama shilin yara xagga mushaharka, inay cawdaana may garan waayin, ee damiirka ayaa masuuliyad ahe, iyana sow ma ogid?
Haddaba Abwaan Yuusufow, laba qodob abwaanku wuu ka firdhan jiray, waanu ka feejignaan jiray; Ku milanka Dawladda iyo Maalka Dawladda. Adna waa labada aad ku garnaqsatay !
Mar kale, fasirka hadalkaagu, adiga iyo Dawladeheenii horeba wuu durayaa, waayo? Dadka qaar ayaa kuu macnaysan kara, nin la ogaan jiray, oo la illaaway. Arintani waa mid ay ku dagmi karaan, dad badan oo aan hoos kuu ogayn, dhaliilna kugu noqon karta, adoo tu hore iyo mid hadda joogta, laga yaabo inaadan waxba ku qabin.
Da’yarta tahriibtay iyo Siyaasiga tallaabay, labaduba dalkooda ha qawadaan, laakiin adigu ka tagaya inaad soo celiso, duruuftana ha lagu samro tidhaado, ayaa kuu wacnayd, lagaana filayay. Haddii se Qarankaagu ka danayso kaa istaahilay, intiisa dagan inaad shisheeyaha u muujiso kaama istaahilo !
Had iyo goor Yuusufow isma raacaan sedka iyo sumcadu. Waxa taa kuugu maraga Hadraawi oo aan Gabay moooyee hanti guunyeed meel u oolin, isaguna aan tabcan oon isku lurin. Waana sifada Hal-abuurka oo guunyadoodu waa ka shaqaynta danta guud, hantidooduna waa dadwaynaha.
Yuusufow, maanta waxa kuu habboonayd, in af-kaagu gudbiyo baahida ummada.
Sidii Hadraawi iyo Gaarriyeba u ahaayeen, Caroogga Sabooolka. Iyagoo da’ ahaan ka yar eyniga maanta aad jirto, dhaqaale ahaanna ka liita ta aad maanta ku nooshahay, Dawlada ay ku hoos noolyihiinna tahay mid Askariya, halka adigu aad haysato, Dawlad Shicib soo doortay, dhaliilaheedana sixi karto. Kuumay se habooneyn in afkaagu gudbiyo baahida naftaada, sida hadalkaaga laga dheehanayo !
Gunaanadkii; waxaan kugula talin lahaa
Abwaan Yuusufow, saddex baad leedahaye, saddex ha ku darsan:
Waxaad tahay weeleeye, ee werintaada caddaalad ku dar.
Dhaqan aqoon ayaad tahay, ee is dhibrin ku darso.
Aftahan ayaad tahay, ee aragti cadna ku darso.
Ugu dembayn, Ilaahay madaxaaga ha raajiyo, mijahaagana ha tarmiyo, magacaagana ha waariyo.
Qalinkii: Guuleed Yuusuf Axmed
Previous articleUrurka Dhallinyaradda Ee Midnimo Oo Si Weyn Uga Qayb Qaatay Ololaha Nadiifinta Dooxa Hargeysa
Next articleWararkii ugu dambeeyay qaraxii Ismiidaminta ahaa ee maanta ka dhacay Muqdisho iyo Al-shabaab oo sheegatay